FESOJ oo cambaareysay xariga Wariye Dulyar loogu gaystay Beledweyne | Dhacdo
FESOJ oo cambaareysay xariga Wariye Dulyar loogu gaystay Beledweyne
Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ ayaa si kulul u cambaareeyay xariga Wariye Cabdulqaadir Faarax Dulyar ee xalay loogu gaystay Magaalada Beledweyne.
FESOJ ayaa sheegtay in ay ka xun tahay habdhaqanka laamaha ammaanka, oo ay ku eedeysay in saq dhexe ay Wariyaha ugu dhaceen hotelkii uu ka deganaa magaalada.
Qoraal ay soo saartay FESOJ ayaa lagu yiri “Ururka Isutagga Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ waxa uu si kulul u cambaareynayaa xariga sharci darrada ah ee Maamulka Hirshabelle, gaar ahaan Madaxweyne Kuxigeenka uu kula kacay Wariye Cabdulqaadir Faarax Dulyar. Waxa sidoo kale FESOJ ay aad uga xun tahay habdhaqanka laamaha ammaanka Beledweyne, oo saq dhexe u dhacay hotelka uu magaalada ka deganaa Wariye Dulyar, taasoo baalmarsan Dastuurka, Xeerka Saxaafadda iyo Shuruucda kale ee dalka u yaala.”
FESOJ ayaa Maamulka Hirshabelle ugu yeertay in si shuruud la’aan ahi xabsiga looga sii daayo ninka Wariyaha, haddii aanu dambi ahayn in la wareysto qof ka soo horjeeda maamulka.
“FESOJ waxa ay Dowladda Hirshabelle ka dalbaneysaa in si shuruud la’aan ah lagu sii daayo Wariyaha, maadaama aanay dambi aheyn in qof maamulka ka horjeeda la wareysto. In aad aqbasho qofka kaa aragti duwan ayaa ah dimoqraadiyadda iyo dowladnimada.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Wariye Dulyar ayaa waxaa lagu haystaa wareysi uu Arbacadii duleedka Magaalada Beledweyne kula yeeshay General Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo ka tirsanaa Saraakiishii hore ee Militariga Somaliya, haatana ka soo horjeeda Maamulka Hirshabelle.
General Xuud ayaa hadda hoggaaminaya Jabhadda HLF (Hiran Liberation Front) oo daba-yaaqadii bishii hore ee November looga dhawaaqay deegaanka Ceelgaal ee duleedka Beledweyne, isagoona ka biyo diidan doorashadii 11-kii November ka dhacday Magaalada Jowhar, Cali Guudlaawe-na loogu soo doortay inuu noqdo Madaxweynaha Hirshabelle.
Somaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mida wadamada ugu halista badan dunida ee Wariye uu ka hawlgalo.
Puntland oo ka hadashay xiisadda ka dhalatay xil ka qaadista Agaasimihii...
Madaxtooyada Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xiisadda ka dhalatay xil ka qaadista lagu sameeyay Agaasimihii Hay'adda PSF, General Maxamuud Cismaan...
Abiy Ahmed oo markan ciyaaraya qorshe uu cadaadis ku saarayo Mareykanka
Yuusuf Dabageed oo la kulmay Ra’iisal Wasaare Rooble (SAWIRRO)
Laamaha amniga oo baaraya dhacdo naxdin leh oo Muqdisho ka dhacday
Rooble oo Safiirka Emirate-ka kala hadlay xiriirka labada dal (SAWIRRO)
Ciidanka Booliska iyo sida ay amniga goobaha doorashada u sugayaan